FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SISINTANY-AUSSIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika sisintany-Aussie
Alika mpihetsiketsika mifangaro / mpiambina aostralianina
'Duke dia hazo fijalian'i Border Collie / Mpiandry Aostraliana azontsika rehefa nanandrana nanolo ilay Mpiandry Aostraliana feno ra feno izahay. Tsy mahasolo an'i Duke fa mijoro tanteraka amin'ny toetrany manokana izy. Heveriko fa tsy niomana firy tamin'ny fizarana Border Collie izahay. ny angovo tsy manam-petra ary ny fahalianana tsy manam-petra dia tsy mamela anao hipetraka mijanona miaraka amin'ity alika ity. Amin'ny lafiny ambony, izy no alika manan-tsaina indrindra ary mahay mandray indrindra izay efa hitako. Adinoy ny baikon'ny tanana fa hamaly amin'ny alàlan'ny mason'ny maso izy. Ity no Ferrari alika. '
Ny alàlan'ny sisintany-Aussie dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpiandry Aostraliana ary ny Border Collie . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Lexi ilay alika hybrid Border-Aussie (Border Collie / fifangaroana mpiandry aostraliana)
dachshund cocker spaniel afangaro alika kely hamidy
Border-Aussie maso malaso manga (Border Collie / alika mpiompy ostraliana mpiompy)
Alika manga Border-Aussie maso (Border Collie / Alika mpiompy ostraliana mpiompy)
Alika kely Border-Aussie (alika hybrid mpiambina aostralianina)
'Cully the Border-Aussie fony izy efa ho 8 herinandro - ny reniny dia Border Collie antsoina hoe Blue, ho azy maso manga . Ilay raim-pianakaviana dia mena mpiompy aostralianina mena, Nash, niteraka kely, nefa iray hakiho lava ny halavany. Lehilahy mainty sy fotsy no tadiaviko. Cully dia tri, saingy tsy afaka namorona loko marevaka kokoa ny tenako. '
'Nanana Border Collies izahay fony aho nihalehibe tao amin'ny toeram-piompiana tena alika sy biby fiompy tena miasa. Tena alika tsy manam-paharoa izy ireo, mahaliana, mahatsikaiky ary tena marani-tsaina. Tiako izy ireo! Ireo karazany roa ao amin'ity lakroa ity dia manana fitoviana be dia be, tsy azoko antoka fa tsy hitovy amin'ny an'i Cully Kolontsaina sisintany noho ny fananana ny Aussie ao aminy. Fantatro fa tsy hanana asa hatao amin'ny iray hektara kelinay izy ary miaina toy ny alika an-trano izay ananan'ny alika miasa! Mikasa ny hanao fampihetseham-batana miaraka aminy aho ary antenaiko fa ho afaka hampiofana azy TSY hanenjika soavaly hahafahany mandeha miaraka amiko. Ireo alika ireo dia mila famporisihana betsaka ary i Cully, na dia eo amin'ny 2 volana aza, dia nanazava izany tsara! Efa hitako io a mandeha maraina dia ho zava-dehibe kokoa, fa henjana kosa ny rivotra mangatsiaka eto amin'ny MN milentika ambany zoma maraina! Te hampianatra azy aho mihazakazaka eo amin'ny fitoeran-tongotra ho backup ho an'ny andro ratsy. Izy dia manana ny toetra voajanahary rehetra amin'ny mpiompy ary mianatra tsikelikely tsy hikorontana ny voditongotra. Tena mitsako izy, nefa azoko antoka fa hihatsara koa izany, raha mazoto isika manome zavatra hafa tokony hatao aminy! Nihevitra ny vadiko fa mety kokoa ny tranonay a Basset Hound , fa faly be amin'ilay alika nandrasako efa an-taonany maro aho! '
'Harlee ilay fangaro mainty sy fotsy Border Collie / Australian Shepherd mix amin'ny 10 volana dia lasa alika mahafinaritra. Alika marani-tsaina, tsara toetra ary tsy mivadika izy. '
'Ity no sisin-taninay Collie / Australian Shepherd mix Harlee. Nalaiko ity sary ity raha niara-nilalao tamin'ny reniny izy. Izy dia zazakely tena haingo! Tokony ho 5 volana teo amin'ity sary ity izy. Tiany ny mitolona sy milalao ady! '
cairn terrier ary dachshund afangaro
'Harlee the Border Collie / Australian Shepherd mifangaro amin'ny 3 volana, miala sasatra ao anaty ahitra aorian'ny tolona tolona nifanaovany tamin'ny alika sakaizany efa telo volana teo ho eo.'
'Harlee the Border Collie / Australian Shepherd mix at 9 herinandro, tamin'ny diany voalohany avy tany an-tranonay tany Tulsa, OK mba hitsidika ireo rafozana ao Amarillo, TX'
'Harlee the Border Collie / Australian Shepherd mix ao amin'ny 7 herinandro, ny alina nahitanay azy. Alika kely mahafatifaty toy izany izy !!! '
'Jade dia mpiandry ondry Aostralianina / Border Collie mifangaro amin'ny angovo bebe kokoa noho ny fantany izay hatao. Noheverinay fa nafeninay ny sakafon-saka saka, saingy tsy dia ampy loatra izany. Nody izahay ary ny lohany niraikitra tao anaty kitapo tsy nisy porofo momba ny saka saka na taiza na taiza. Nafeninay tao anaty sombin-kazo teo ambonin'ny tranony ny alika saka saka saka. Afaka nahatratra azy ny saka ary toa nahavita izany koa izy. Kely izy nefa mitsambikina avo kokoa noho ny fahitako ny alika lehibe kokoa mitsambikina. Entiny manodidina ny baolina teniny ary apetrany eo an-tanako izany isaky ny mahazo azy. Jade dia tia ny olona rehetra ary faly be rehefa misy miresaka aminy. Rehefa afaka milamina izy dia tia misolelaka sy mitsofoka eo am-pandriako. Tena mahay izy ary mahay teny be loatra. Ny teny tiany indrindra dia ny 'Treat,' 'Car,' 'Kitty,' ary 'Run / Walk' (aleony mihazakazaka). Mitandrina izy izao mba tsy hametahana ny lohany ao anaty kitapo, fa mbola tia misakafo ihany izy. Hihinana betsaka araka izay omentsika azy izy. '
'Ireto sary ireto dia an'ny zanako kely 9-herinandro. Izy ireo dia fifangaroan'ny Shepherd / Border Collie aostralianina. Misy zazalahy roa (Taz sy Pooh Bear) ary zazavavy iray (Bailey). Taz no mainty sy mpihaza. Pooh no volomboasary ary azo antoka fa izy no mamy indrindra. Bailey no miloko mifangaro ary milalao indrindra. Nilaza tamiko ny rehetra fa adala aho satria mahazo alika kely telo indray mandeha nefa tsy afaka nifaly niaraka tamin'izy ireo aho. Ny tantara dia ny sakaizako nandre momba ny tovolahy manome alika kely eny an-dalambe ka dia nandeha nijery azy ireo izahay mba hahazo iray. Rehefa tonga tany izahay dia nanana telo sisa izy ireo ary samy nihazakazaka nanatona anay izy rehetra. Nanapa-kevitra ny hitondra azy ireo any an-trano mandritra ny fotoana fohy izahay hijerena ny fomba hataon'izy ireo amin'ilay alika zokinay izay tsy mitovy karazana. Rehefa tonga tany an-trano izahay dia fantatray fa tsy afaka mamerina azy ireo izahay ary izany no izy. 'Fitia eo noho eo.' Hatreto dia zanak'alika kely izy ireo, be fitiavana sy be hery. Tian'izy ireo ny miaraka milalao sy mitazona orinasa. Na dia tantara hafa daholo aza izany rehefa fotoam-pisakafoanana. Ny zavatra lehibe iray hitako momba azy ireo dia ny tadiavin'ilay iray hafa foana. '
Pooh Bear, Bailey ary Taz, Border Collie / Australian Shepherd mifangaro alika kely amin'ny 9 herinandro (Border-Aussies)
Sheela the Border-Aussie mifangaro alika (Border Collie / Australian Shepherd mix) amin'ny 6 volana -'Manana angovo izy, manan-tsaina ary mampihomehy! '
Sheela the tri-color Border-Aussie mix breed (Border Collie / Australian Shepherd mix) alika kely amin'ny 3 volana
Sheela the Border-Aussie mix dog dog (Border Collie / Australian Shepherd mix) alika kely amin'ny 3 volana mandositra miaraka aminy kilalao hamburger .
Lisitry ny alika mpiompy afrikanina mpiompy
Lisitry ny alika mifangaro ao amin'ny sisintany Collie
sarin'ny alika doodle volamena
aostraliana mpiompy poodle mix mini
ekosey terrier sy ny poodle Mix